साताको अन्तिम दिन सुनको मूल्य तोलामा कति ? - नेपालबहस
साताको अन्तिम दिन सुनको मूल्य तोलामा कति ?
| १५:१३:३० मा प्रकाशित
१३ फागुन, काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन आज सुनको मूल्य तोलामा पाँच सयले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा ५ सय रुपैयाँले घटेको हो ।
महासंघका अनुसार बिहीबार नेपाली बजारमा छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ८९ हजार ३ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि बुधबार नेपाली बजारमा छापावाल सुनको मूल्य तोलाको ८९ हजार ८ सय रुपैयाँ थियो ।
बिहीबार तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको ८८ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि बुधबार नेपाली बजारमा तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ८९ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ थियो ।
साप्ताहिक कारोबारको पहिलो दिन ‘फागुन ९ गते, आइतबार’ बढेको सुनको मूल्य त्यसपछि सोमबार यथावत रह्यो भने मंगलबार बढेको थियो । मंगलबार तोलामा १ हजार १ सय रुपैयाँ बढेर छापावाल सुनको मूल्य ९० हजार १ सय रुपैयाँ प्रतितोला पुगेको थियो ।
मंगलबार ९० हजारको आंकडा पार गरेको सु्नको मूल्य बुधबार भने पुनः ओरालो लाग्यो । बुधबार सुनको मूल्य तोलामा ३ सय रुपैयाँले घटेको थियो ।
सुनको भाउ तोलामा पुनः ९० हजार पुग्याे ७ दिन पहिले
सोमबार सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि २ हप्ता पहिले
एमाले विभाजन र विसर्जनको डिलमा १२ घण्टा पहिले
आज राति नेपाली आकाशमा उल्का वर्षा देखिने १८ घण्टा पहिले
बारामा एक महिलाको हत्या, घटनापछि श्रीमान फरार ११ घण्टा पहिले
बिक्रीका लागि राखिएका स्थानीय उत्पादन १४ घण्टा पहिले
बिशाल बजार कम्पनीको शेयरमूल्य उच्च दरमा वृद्धि १६ घण्टा पहिले
सैन्य सङ्गठनमा प्रतिकूल हुने कार्य नगर्न थापाको निर्देशन १२ घण्टा पहिले
ओली सरकार ढाल्ने माओवादीकाे निर्णय २ दिन पहिले
स्पेन भ्रमण राष्ट्रहितका लागि फलदायी :अध्यक्ष तिमिल्सिना ४ दिन पहिले
ढकमक्क फुलेका लालीगुराँस ४ दिन पहिले
डेढ दर्जन सामुदायिक वनमा डढेलो ३ हप्ता पहिले
ओलीको विकल्प खोज्न पौडेल सक्रिय ३ हप्ता पहिले
एमाले प्रवेश गरेसंगै व्यवसायी प्रधानलाई एयरलाइन्सको सञ्चालक उपहार २ हप्ता पहिले
चिनियाँ नागरिकमाथि लुटपाट गर्ने चार पक्राउ ३ हप्ता पहिले
शेरधन राईलाई राहत ४ हप्ता पहिले
नागस्थान चोकमा ट्राफिक बत्ती जडान २ हप्ता पहिले
हेटौँडामा कोभिड–१९ को खोप शुभारम्भ ३ महिना पहिले
न्यायिक समितिमा जग्गा विवादका उजुरी धेरै ४ महिना पहिले
पर्यटन मजदुरलाई निःशुल्क एकमहिने चिनियाँ भाषा तालिम २ वर्ष पहिले
हात्तीपाइले निवारणका लागि पुनःचौँथो पटक नमूना संकलन ३ महिना पहिले